Bisolvon (ဘိုင်ဆိုဗွန် ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Bisolvon (ဘိုင်ဆိုဗွန် )
Bisolvon (ဘိုင်ဆိုဗွန် ) ကဘာလဲ။
Generic Name: Bisolvon (ဘိုင်ဆိုဗွန် ) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Bisolvon (ဘိုင်ဆိုဗွန် ) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ချွဲတွေထွက်ခြင်းနှင့် ပို့ဆောင်မှုပုံမှန်မဟုတ်ခြင်းတွေနဲ့အတူတွေ့ရတဲ့ ယာယီနဲ့ နာတာရှည်လေပြွန်ရောဂါတွေမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Bisolvon (ဘိုင်ဆိုဗွန် ) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Bisolvon (ဘိုင်ဆိုဗွန် ) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Bisolvon (ဘိုင်ဆိုဗွန် ) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Bisolvon® သို့ အခြားသောဆေးများနဲ့ ဓါတ်မတည့်မှုတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Bisolvon (ဘိုင်ဆိုဗွန် ) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Bisolvon (ဘိုင်ဆိုဗွန် ) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဘယ်ဆေးတွေက Bisolvon (ဘိုင်ဆိုဗွန် ) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Bisolvon (ဘိုင်ဆိုဗွန် ) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Bisolvon (ဘိုင်ဆိုဗွန် ) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Bisolvon (ဘိုင်ဆိုဗွန် ) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေနဲ့ အသက်၁၂နှစ်အောက်ကလေးများအတွက် 10 mL (8 mg)
ကလေးတွေအတွက် Bisolvon (ဘိုင်ဆိုဗွန် ) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အသက်၇နှစ်မှ၁၂နှစ်အထိ5mL (4 mg).
အသက်၂နှစ်မှ၆နှစ်အထိ 2.5 mL (2 mg).
အသက်၂နှစ်အောက် 1.25 mL (1 mg).
Bisolvon (ဘိုင်ဆိုဗွန် ) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ